Rano Arnica Montana mpanodina mpanodina HPLC ≥98% | AASraw
/ Products / R & D Reagents / Arnica Montana
Sokajy: R & D Reagents
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra avy amin'ny gram ka hatramin'ny lamin'ny amboara Arnica Montana, eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Arnica Montana vovoka dia poizina amin'ny fanindroany amin'ny heriny feno, fa azo ampiasaina ho dipoavatra, gel na siramamy amin'ny hoditra tsy nodorana na entina anaty rehefa mivoatra any an-trano. Nanjary lasa iray amin'ireo medikaly malaza manerana izao tontolo izao i Arnica ....
Horonan-tsary poeta Arnica Montana
Arnica Montana karazan-tsoratra fototra
Name: Arnica Montana vovoka
Arnica Montana fampiasana poofa
Anarana mahazatra kokoa ho an'i Arnica Montanaare Mountain daisy, leopard leopard sy sigara Mountain.
Aretina Aretina Arnica Montana
Tsy misy aretin-koditra arika Arnica Montana na doka manokana izay tena ankasitrahana; Misy doka maro samihafa amin'ny fampiasana hafa. Ny doses mety dia tsy maintsy resahina amin'ny dokotera amin'ny fahasalamana aloha, ary tokony hovakinao tsara foana ny mari-pamantarana.
Arnica Montanais miteraka alika rehefa nalaina am-bava raha tsy navotsotra tao amin'ny dosie homéopathie toy ny 30X na 200D.
Fampitandremana momba ny vovo-dronono Arnica Montana
Ny fitsaboana homamiadana dia rafitra iray amin'ny fanafody izay mifototra amin'ny antsoina hoe "toro-hevitra toy ny fitsaboana", izay ampiasana ny tsimok'aretina izay mahatonga ny soritr'aretina amin'ny marary salama dia ampiasaina (amin'ny ampahany ambany dia ambany) mba hitovy amin'ny soritr'aretina mitovy olona marary. Noho izany, amin'ny hômeôpatia, ny fanafody dia mahomby kokoa rehefa mihalalina kokoa: ny 200C dia mahery kokoa noho ny dosage 6C.
Ny Arnica Montanacan koa dia ampiasaina mba hanamaivana ny fahamendrehana amin'ny fiaramanidina manidina na lavitra lavitra. Ary na iza na iza miezaka mora dia hahatsapa ny fahaiza-manaon'i Arnica Montana hampihenana ny fivalanana manga.
Mba hisorohana ny fahasimbana kely, ny fandinihina na ny fandidiana, ny Arnica Montanais dia tsy maintsy misahana ny kabinetra tsirairay. Na mpilalao boomera mavitrika ianao, mpilalao amin'ny faran'ny herinandro na mpilalao matihanina iray, dia ny valiny tonga lafatra amin'ny ratra kely rehetra iainana.
Ahoana no hividianana menaka Arnica Montana avy any AASraw